SENATERA KALETA : “ Tsy hampihemotra ny Armada izay lalàm- pifidianana lany eo”
Manao tohy vakana hatrany ny fanehoan-kevitr’ireo mpanao politika manoloana ny fandaniana ilay volavolan-dalàna natao hifehy ny fifidianana amin’ity taona ity. 31 mars 2018
Nanao fanambaràna sy nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izany ihany koa ny senatera Kaleta omaly. Ny tenany izay nilaza fa tsy natao hampihemotra velively amin’ny fifidianana izay lalàm-pifidianana lany eo. Tsy takona afenina intsony ny fisian’ny kajikajy politika maloton’ny fitondrana amin’ireo andininy sasantsasany ao anatin’ity lalàna mahabe resaka ny maro ity.
Mibaribary ny fanomezana tombon-dahiny ny antokon’ny fanjakana. Omaly, nitondra ny fanehoan-keviny miompana indrindra amin’ireo votoatin’ny lalàm-pirenena ny loholon’i Madagasikara nandritra ny fitondran-Ravalomanana, ny senatera Kaleta. Tao anatin’izany no nitondra tsikera sy fanakianana amin’ireo andininy sasantsany ao anatin’ilay volavolan- dalàm-pifidianana ity. Nambarany fa ny vondron’ny antoko politika Armada dia mahita fa misy tsy mety ao anatin’io lalàm-pifidianana io.
“Betsaka ny zavatra hitako fa tsy mety, ary tsy ny mpanao politika irery fa na dia ny eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena aza na ireo mpahay lalàna dia samy mitsikera ity lalàm-pifidianana ity daholo. Izahay Armada dia mahita ihany koa fa tsy mety io”, hoy ny fanambaràna noentin’ny senatera Kaleta. Anisany notsongaina tamin’izany ny voalaza ao anatin’ny andininy faha-60, ny andiniy faha-10 ary any andininy faha-110.
Ity farany dia efa nanehoan’ny rehetra hevitra fa tsy mety izay mamehy ny fahalalahan’ireo fahitalavitra tsy miankina amin’ny fanjakana. Ankoatr’izay ihany koa ny voalaza ao amin’ny andininy faha-120 izay miresaka manokana momba ny biletà tokana, ary ny andininy faha-22. Ireo andinin-dalàna ireo no anisany miteraka resabe amin’izao fotoana izao, miampy ireo andinin-dalàna izay miendrika fanilikilihana kandidà hafa izay mahatonga fifandroritana eo amin’ny solombavambahoaka mihitsy. Misy amin’ireto farany no mikasa handany ity lalàm-pifidianana ity amin’ny endriny tsy asiam-panovàna ary misy kosa ireo mitsipaka izany.
Hentitra ny senatera Kaleta raha nilaza fa na amin’ny endriny manao ahoana na amin’ny endriny manao ahoana ny lalàm-pifidianana, ny lany eo dia tsy hataon’ny Armada sakana amin’ny fiatrehana ny fifidianana velively izany. “Na inona na inona fanapahan-kevitra mivoaka eo, izahay Armada dia vonona hiatrika ny fifidianana na inona na inona miseho”, hoy ny fanazavany. Ny vondrona politika Armada hatrany am-boalohany no efa nivoy hatrany ny hanolotra kandidà tokana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena.
Aoka izay ny amboletra
Ny talata ho avy izao raha tsy misy ny fiovàna no hiroso amin’ny fandaniana an’io lalàm-pifidianana io ny eo anivon’ny antenimieram-pirenena. Eo anatrehan’ny amboletra mety hiseho sy ny tsindry avy amin’ny fanjakana dia nanao antso avo amin’ny filoham-pirenena ny senatera Kaleta ny amin’ny tokony hisian’ny fandraisan’andraikitra avy aminy manoloana ny fandaniana ity lalàm-pifidianana ity, amin’ny alalan’ny fampiantsoana ireo lehiben’ny andrim-panjakana telo dia ny antenimieram-pirenena, antenimieran-doholona ary ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana.
Ankoatr’izay, soson-kevitra no nomeny ny amin’ny tokony hamerenana ny fampiasana ny lalàm-pifidianana tamin’ny taona 2012-2013. “Nahalany anao andriamatoa Filoham-pirenena ny lalàm-pifidianana tamin’ny taona 2012-2013. Io no nahalany anao nanohanan’ny filoha Andry Rajoelina anao, ka inona ny maharatsy an’io ? Io no avereno ary tsoahy ity iray maha be resaka ity, dia avereno ilay lalàm-pifidianana tamin’ny 2012-2013”, hoy ny senatera Kaleta. Nanipy teny ho an’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta ihany koa ny tenany ny amin’ny hitsaharan’ny amboletra amin’izay.